XOG : Maxuu Salka Ku Hayaa Xiisadda Diblomaasiyadeed Ee Kenya Iyo Soomaaliya | Sanaagmedia — Warar Sugan
XOG : Maxuu Salka Ku Hayaa Xiisadda Diblomaasiyadeed Ee Kenya Iyo Soomaaliya
February 17, 2019 - Written by admin
Xiisadda diblomaasiyadeed ee u dhaxeysa dalalka Kenya iyo Soomaaliya ayaa cirka isku shareertay, kadib markii dowladda Kenya ay Soomaaliya ku eedeesay in London ay ku “xaraashtay” ceelal shidaal oo ku yaala xuduuda lagu muran sanyahay.
Dowladda Soomaaliya ay dhawaan magaalada London ee dalka Ingiriiska kusoo bandhigtay maclumaad la xidhiidha “sahmin shidaal” oo ay sheegtay in laga sameeyay dhanka badda, waxaana maclumaadkaasi soo bandhigtay shirkadda Spectrum ee laga leeyahay dalka Mareykanka.
Kenya ayaa sheegtay in Soomaaliya ay kusoo xad-gudubtay, sidoo kalena ay damaanad qaad u qaadatay taageerada ay siiso.
Balse dadka ka faalooda arrimaha diblomaasiyadda ayaa aaminsan in Kenya ay ku “fududaatay” go’aanka ay qaadatay marka la eego xidhiidhka taariikhiga ee ka dhaxeeya labada dal.
“Kenya qalad weyn oo diblomaasiyadeed ayay gashay. Labada dal xiriir weyn oo diblomaasiyadeed ayaa ka dhaxeeya, ciidaan nabad ilaalin ayaa Kenya ka jooga Soomaaliya; inay heerkaasi gaarsiiso, luuqadaasi adag na isticmaasho oo safiirka Muqdisho u joogay ay u yeerato, kii Soomaaliya na ay tirahdo dalka ka baxa waa qalad diblomaasiyaadeed. Sidaasi waxaa BBC-da u sheegay Ambasadar Ciid Badal oo horay u soo noqday safiirka Soomaaliya ee Qaramada Midoobay.
Ambasadar Ciid Badal oo horay u soo noqday safiirka Soomaaliya ee Qaramada Midoobay.
Ciid Badal ayaa sidoo kale sheegay in qaabka ugu haboon ee arrintan lagu wajihi karay ay aheyd in kenya ay la fariisato dowladda Soomaaliya, waxaana uu intaa raaciyay in marka la eego dacwadda hortaala maxakamadda, Soomaaliya lagaga gar helayo arrintan.
“Sharci ahaan, Kenya way ku sax sanaan kartaa, sababtoo ah horay ayay Kenya ceelal shidaal oo badda ah u bixixsay. Soomaaliya way ka dacwootay oo maxkamadda caalamiga ayay tagtay, waxayna tiri Kenya waxay kusoo xad-gudubtay baddena oo waxay ka baareysaa shidaal, maxakamaddii way dhageysatay oo dacwadii way socotaa , haddaba haddii Soomaaliya ceelashii ay geysay London, sharciyan Kenya way sax sanaan kartaa “. Ayuu raaciyay Ciid Badal.
Ilo wareedyo lagu kalsoonaan karo ayaa BBC-da u sheegay in go’aankan kahor, Kenya ay dowladda Soomaaliya u dirtay warqad ay uga dalbanaeyso in raaligelin ay ka bixiso arrinkaasi, dibna ug laabato.
Hasayeeshee dowladda Soomaaliya ay ka gaabsatay inay ka jawaabto walaaca Kenya ay qabto.
Xoghayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya Mr Macharia Kamau aya sheegay in Kenya aysan marnaba iska indha tiri doonin arrinkan.
“Xadgudubkan aan wax loo dhiga lahayn ee sida sharci darrada lagu xoogayo hantida dadka reer Kenya, ma ahan mid laga aamusi karo, wuxuuna u dhigmaa fal cadawtinimo oo ka dhan ah dadka reer Kenya iyo hantidooda”.
Kamau ayaa sidoo kale sheegay in loo baahan yahay in arrintan si wadajir ah looga hortago.
“Xaraashkan gardarrada ah wuxuu u qalmaa in laga hortago, dadka reer Kenya si wada jir ah ayay uga hor-imaan doonaan, waxaa sidaas si la mid ah uga hor-imaan doono dadka samaha jecel oo dhan ee aaminsan ilaalinta sharciyada caalamiga ah, iyo in si nabadgelyo ah oo xeerarka waafaqsan lagu xalliyo murannada,”. Sidaa waxaa war qoraal ah ku sheegay xoghayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya Mr Kamau.
Muranka dhanka badda ee u dhaxeeya dalalka Kenya iyo Soomaaliya ayaa in muddo ah soo jiitamayay, waxaana sannadkii 2014-ka ay dowladda Soomaaliya maxkamadda cadaaladda ee adduunka ay u gudbisay dacwad ka dhan ah Kenya oo iyadu dooneesay in soohdinta badda ee labada dal la waafajiyo tan barriga.
Dacwadaasi ayaa haatan hortaala maxkamadda ICJ, waxaana garsoorayaasha ay oggolaadeen in maxkamaddu ay dhageysan karto dacwadda la xiriirta arrintan, inkastoo Kenya ay marwalba dooneysay in arrintan lagu dhameeyo qaab is-fahan ah oo aan la geyn maxkamadda.
Kenya oo ay ku nool yihiin qaxooti badan oo Soomaaliyeed ayaa waxaan la garaneyn halka arrintan ay ku dambeyn doonto.
Copyright © 2020 Sanaagmedia © All rights reserved.